कांग्रेसका चर्चित नेता पक्राउ, को हुन् उनि ? - jagritikhabar.com
कांग्रेसका चर्चित नेता पक्राउ, को हुन् उनि ?
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अझै सकिएको छैन्। कांग्रेस उपसभापतिमा भर्खरै निर्वाचित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यो रुपन्देहीको खबर हो।
नेपाली कांग्रेसका सिद्धार्थनगर पालिकाका उपसभापति एवम् वडा नम्बर—७ का वडा सदस्य किरण घिमिरेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ गरिएको बुझिएको छ।
यद्यपि यो विषयमा प्रहरीले औपचारिक रुपमा बोलेको छैन्। उनलाई सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको उनकै घरबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको हुँदा थप कुरा पछि मात्र बताउन मिल्ने रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता नवरत्न पौडेलले बताए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका नजिकका व्यक्ति भएका कारण,
प्रहरीले समेत विषय लुकाउन खोजेको आरोप छ। त्यस्तै, धनुषाको मिथिला नगरपालिका ६ स्थित ढल्केबरबाट प्रहरीले गाँजासहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ।
तेस्तै, काठमाडौँबाट पूर्वमन्त्रीकी छोरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एउटा कार्यक्रममा होहल्ला गर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले रङ्गेहात पक्राउ गरेको हो। स्वर्गीय नेता पूर्वमन्त्री डा. डिल्लीरमण रेग्मीकी छोरी,
अवन्तिका रेग्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई केही घण्टा थुनामा राखेर छोडेको छ। उनलाई शनिवार चार घण्टा प्रहरीवृत्त दरबारमार्गमा रखेर बेलुका ४ बजे रिहाई गरेको अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए।
अवन्तिका रेग्मीले स्वर्गीय रेग्मीको जन्मोत्सवको अवसरमा पुस्तकालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा होहल्ला गरी अवरोध गरेको आरोपमा प्रहरीले लछारपछार गर्दै पक्राउ गरेको थियो।
नातिनीलाई छोरीको रूपमा ग्रहण गरेका स्वर्गीय रेग्मीले आफ्नो सम्पत्तिसमेत शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएका थिए। कार्यक्रममा आफ्नो सम्पत्ति पुस्तकालयले हडपेको भन्दै अवन्तिकाले होहल्ला गरेको,
अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी वृत्तका एक प्रहरीले बताए। अनाहकमा चारघण्टा प्रहरी वृत्तमा राखिएको विरुद्धमा कानुनी कारबाही गर्ने पनि अवन्तिका रेग्मीले बताइन्।
हामीले कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न होस् भनेर एकछिन राखेका हौं, सो प्रहरी वृत्तका एक प्रहरीले नागरिकलाई बताए। कार्यक्रम विना अवरोध सकियोस् भनेर मात्रै उनलाई केही क्षण राखिएको पनि उनको दाबी थियो।
अवन्तिका रेग्मीलाई अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलको जिम्मामा छाडिएको छ। पुस्तकालयले आफ्नो स्वर्गीय पिताको अपमान गरेको, असफल राजनीतिज्ञ भनी स्वर्र्गीय डा। रेग्मीविरुद्ध कुप्रचार गरेको भन्दै,
सम्पत्तिका लागि भूमाफियाहरूले आफूलाई दुःख दिएको अवन्तिकाको आरोप छ। आफ्नै पहलमा पुस्तकालयलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेपछि अहिले आफ्नो निवासबाट आवतजावतमा समेत,
समस्या सिर्जना गरेपछि उनले भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन। स्वर्गीय रेग्मीले पुस्तकालयलाई छोरी अवन्तिका रेग्मीको शेषपछि पाउने गरी पुस्तकालयको नाममा,
काठमाडौं जिल्ला लाजिम्पाट वडा नं. २ कि नं. १३६ को जग्गा दिए पनि आफ्नो जीवनकालमै कित्ताकाट गरी पुस्तकालयको नाममा हक हस्तान्तरण गरी लिएको कार्यको,
समेत उनले रिटमा चुनौती दिएकी छिन्। रेग्मीको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश २०७८ भाद्र ३१ मा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ। आफ्नो जीवनकालमै उक्त जग्गा,
कित्ताकाट गरी पुस्तकालयको नाममा जान नसक्ने दाबीसमेत रिटमा गरिएको छ भने उक्त सम्पत्तिको दुरूपयोग गरेको विरुद्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।